Tenga Isingapindi Mvura Denderedzwa YeHupenyu/Rusingaperi Rudo Karna Pendant Necklace Yevarume | WoopShop®
Isingapindi mvura Denderedzwa reHupenyu/Kusingaperi Rudo Karna Pendant Necklace Yevarume
necklacerundarira 2braceletmheteksi 2
Isingapindi mvura Denderedzwa reHupenyu/Kusingaperi Rudo Karna Pendant Necklace Yevarume - mutsipa yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Chain Type: Tambo Chain
Shape \_ poti: Round
Pendant Saizi: 23.5mm
Muenzaniso Nhamba: Nhema 1351
Saizi: Ndokumbira utarise mafoto ari pazasi
Eco-Inoshamwaridzika: 100% Tungamira & Nickel Yemahara
Allergy: 100% Allergy Yemahara
Yakakwana kune ese zviitiko: yegore, kubatanidzwa, bato, musangano, kufambidzana, muchato, kupfeka kwemazuva ese,
Kufananidza zvipfeko: Zviri nyore kuenderana uye zvinokodzera chero chimiro chembatya
Yakakurumidza kusvika, inotaridzika yakasimba, zvinhu zvakanaka kwazvo.
Nekuti ruoko rwangu rwakakurisa, asi runofanira kugadzirisa
Icho chidimbu chakasimba chinotaridzika chakasimba, mipendero yakanaka uye inotaridzika mhando, yakanaka uye inoyevedza. Iyo tambo iri nyore kwazvo, hoko inotaridzika isina kusimba uye yakaderera mhando handifungi kuti ichagara kwenguva refu (ini ndichaishandisa uye ndotaura gare gare) ndingademba kurasikirwa nezvakataurwa izvi chaizvo.
Necklace yakanaka kwazvo! Hunhu hwakanaka chaizvo, ndinohuda !! Pakarepo kuiswa, pakarepo kugamuchirwa! Yakareruka mumutsipa, uye inogadzirisa zvakanyanya neketani kumashure. Kutumirwa kwakakurumidza! Yakakwana!